Roob maanta Jigjiga ka da'ay oo sababay dhimashada hal qof. Waxaa maanta A... - Idman News
Roob maanta Jigjiga ka da'ay oo sababay dhimashada hal qof. Waxaa maanta A…
Roob maanta Jigjiga ka da'ay oo sababay dhimashada hal qof.
Waxaa maanta Abaara 2:30 PM ilaa 3:40 PM galabnimo ka da'ay caasimada deegaanka ee jigjiga roob dufaan iyo baraf wata islamarkaana kala xidhay dhamaan isku socodkii gaadiidka iyo dadka magaalada jigjiga, wadooyikii magaalada ayaa isu badalay wabiyo biyo butaacayaan.
Dhanka xukuumada DDS, masuuliyiin uu ugu horeeyo Madaxwayne ku xigeenka deegaanka mudane Aadan Faarax, maamulka magaalada jigjiga iyo hay'adaha amaanka ayaa gurmad u bilaabay dadka ay dhibaatadu kasoo gaadhay roobkan sida lama filaanka ah galinkii danbe ee maanta uga day magaalada jigjiga
Ugu dambayntii burburka hantiyeed ee ay gaysteen daadashani ayaan la ogaanin heerka uu gaadhsiisan yahay waxaana socda gurmad kala duwan oo lagu baadi goobayo baaxada khasaaraha.
Berbera: Hay’adda G.I.Z ayaa Xadhiga ka jartay 15 Ceelbiyood iyo Dhaamam
Previous Previous post: “Diiqii dahab cunka ahaa ayaa dhagta iga goostay, anigana waxaan qaatay taladii booliska”
Next Next post: WARKA HABEEN=8:00PM (11=09=2019) – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Wararka Maqal iyo muuqaal (TV, AUDIO, VIDEO) (21,901)